Todobaadka Cajiibka ah ee Dutchtown • DutchtownSTL.org • Dutchtown, St. Louis, MO
Todobaadka Cajiibka ah ee Dutchtown
Toddobaadkii dhammaaday ee Maarso waxay kulmisay ganacsiyada Dutchtown, ururada, deriska, iyo dadka wax ka iibsada ee ka kala yimid daafaha magaalada St. Muusikada, cuntada, iyo baashaalka ayaa dadka ka keenay dhammaan qaybaha nolosha waddooyinka Dutchtown.
Iibka Iibka Jiilaalka Guga Bartamaha Magaalada Dutchtown
Waxaan ku bilownay jimcihii iyo sabtidii iyadoo Iibka Iibka Jiilaalka Guga Bartamaha Magaalada Dutchtown, oo ka kooban in ka badan labaatan dukaanno, makhaayado, iibiyeyaal, iyo ururro ku teedsan saddex baloog oo ka mid ah Waddada Meramec. Ku soo noqnoqda dukaamaysatada iyo macaamiil cusub ayaa u soo xoomay si ay u helaan heshiisyo aan la rumaysan karin iyo dhadhan gaar ah.
Iibka dhammaadka usbuuca waxaa abaabulay milkiilayaasha Kwamboka, Iibinta Carruurta Logan, iyo milkiileyaasha kale ee ganacsiga Dutchtown ee bilaabay abaabulka iyagoo adeegsanaya Kooxda Ganacsiga ee Dutchtown Degmada Facebook. Wada shaqeynta, ganacsatada xaafadayadu waxay hayeen diiwanka dhawaqa markay muujinayaan dukaamadeenna Downtown Downtown Dutchtown.
Dhanka kale, kuwa cuntada ku iibiya Hoolka Cunnada ee Xaafadaha Magaalada ayaa u adeegay suxuun macaan oo laga heli karo oo keliya Dutchtown. Qaxwaha Madoow iyo Cunto macaan waxay naga caawisay inaan u soo kacno maalin weyn oo dukaameysi ah. Juanita's Creole Soul Kafe calool ku qanacsan ilaa laga iibinayo. Iyo Tacos la Jefa waxay ka keeneen cunno macaan agagaarka gobolka inay ku raaxaystaan ​​waxyaabaha ay gaarka u leeyihiin birria tacos, quesadillas, iyo nachos.
Ururada xaafaduhu waxay kujiraan inay xoojinayaan kororka ku socda Dutchtown iyo qorista deriska si ay ugu lug yeeshaan. DT2 • Downtown Dutchtown, Rabshadaha Curyaannimada, Thomas Dunn Xarunta Waxbarshada, Iyo Shirkadda Koonfurta ee Dutchtown dhammaantood waxay gacan ka geysteen faafinta ereyga ku saabsan barnaamijyada xaafadda iyo ilaha.
Sabtiga, Isgoyska Grand waxay u keentay Bunny-ka Easter-ka Magaalada Downtown Dutchtown si ay sawiro ula galaan caruur iyo dad waaweynba maadaama dadkii wax iibsanayay iyo deriskii ay sii wateen socodka Meramec. Cimilada kuleylka ayaa u keentay xitaa dad badan oo wax iibsanaya degmada maalintii labaad ee dhacdada, oo ay ku jiraan dad badan oo soo booqday xaafadda.
Nadiifinta Marquette Park
Horaantii Sabtida, dhowr deris ayaa isugu yimid Marquette Park nadiifinta guga. Tabaruceyaashu waxay gashadeen gacmo gashi waxayna qabsadeen kuwa wax qabsada si ay ula tacaalaan qaar ka mid ah qashinka ku ururay jiilaalka dheer. Xilliga gu'ga, beerta nasashada ayaa heshay nadiifin badan oo loo baahnaa ka hor inta aan mashquulka bilaabmin.
The Tartanka Kubadda Kubbadda Cagta Marquette Maalinta waxaa loo qorsheeyay Axadda, Maarso 28-keeda. Laakiin dabaylo waawayn oo socda iyo duufaano xoog badan, cimiladu way yara adkaatay kulamadii saaxiibtinimo.
Sidaas darteed ciyaaraha ayaa dib loo dhigay illaa Abriil 11-keeda. Laakiin maalintu wali waxay ahayd qorax, oo ay la socoto DJ oo ay la socdaan bratwursts iyo baalal digaag oo diyaar u ah in la kariyo, deriska ayaa wali go’aansaday in ay maalinta ka faa ideystaan
Dhowr kulan oo aan degdeg ahayn, oo aan loo oggolaan ayaa ka dhex dhacay kooxihii goor hore yimid. Ciyaartoydu waxay heli doonaan faa'iido tartan ah marka rasmiga rasmiga ah uu dhaco hadda oo ay yaqaanaan meelaha ugu hooseeya ee Marquette.
Dhanka kale, geesiga maalinta blustery wuxuu ahaa booqde oo dhowr qaniinyo u keenay beerta lana wadaago carruurta (iyo dadka waaweyn) weli ka soo qayb galaya. Duuliyayaashu waxay fuuleen buurta furan ee ku xigta Field House koodahooduna si dhib la’aan ayey uga kaceen oo cirka u wareegeen.
Muusikada iyo qiiqa dubitaanka ayaa baarkinka ka buuxsamay iyadoo dhawr iyo toban deris ah ay sii wadaan geesinimada dabaysha qabow. Carruurtu way wada ciyaarayeen, dadka waaweyni way isla dheelmeen, xitaa dhalinyarada ayaa u muuqday inay naftooda ku raaxeysanayaan.
Galabtii dambe, dhowr koox hiwaayad heer sare ah ayaa qaatay Garoonka kubada cagta ee Marquette Park ciyaar. Taageerayaasha ayaa isugu soo ururay hareeraha jardiinada si ay ciyaarta u qaataan, oo ah dhacdo joogto ah maalmaha sabtida iyo axadda ee Marquette. Isbahaysiga Marquette Park waxay muddo dheer riixayeen hagaajinta garoonka sida aadka ah loo isticmaalay, waxaana rajeyneynaa in maalgashi muhiim ah uu soo socdo.
Marka, taasi waa wixii ka dhacay Dutchtown dhammaadka usbuucan. Waxaan rajeyneynaa inaad halkaas joogtay! Laakiin haddii aad seegtay, waxaad had iyo jeer ka faa'iideysan kartaa dhammaadka usbuuca dhinaca Koonfureed adoo booqanaya dukaankeenna gaarka ah, dayactirka makhaayadahayada, ama nasashada nasashada. Isha ku hay Kalandarka dhacdooyinka Dutchtown dhacdooyin gaar ah oo dheeri ah, ama soo booqo waqti kasta!
By habka, waxaa jira farabadan oo sawiro dheeraad ah oo ku saabsan DutchtownSTL Flickr bogga. Ka daawo sawirro dheeri ah iibinta waddada, Axadda Marquette Park, ama kaliya ku meeraysato.
Filimka hoos Dhacdooyinka Dutchtown. Muuji dhamaan qeybaha. Ganacsi, Dutchtown, Dutchtown CID, Iyo Dhacdooyinka Dutchtown. Muuji qaybo yar.
La wadaag qoraalkaan Facebook, Twitter, ama maraya Email. Qoraalkan ayaa markii ugu dambeysay la cusbooneysiiyay April 2nd, 2021 .
DutchtownSTL.org Dhacdooyinka Dutchtown Todobaadka Cajiibka ah ee Dutchtown